Ikhaya » izithuba » Iindaba zokuHamba » Iindaba zesikhululo senqwelomoya: Iindiza zaseJapan ziphucula iinkonzo eHaneda
Iindaba zesikhululo senqwelomoya: Iindiza zaseJapan ziphucula iinkonzo eHaneda
Septemba 6, 2010
Ekwindla, iJapan Airlines (JAL) izakuqala ngenqwelomoya ukusuka eHaneda ukuya e-US, eYurophu nase-Asiya, kwaye uhambo lwaphesheya kwezilwandle aluyi kuba lula kuphela kubahlali bedolophu eTokyo, kodwa nge-JAL's ext
Ekwindla, iJapan Airlines (JAL) izakuqala ngeenqwelomoya ukusuka eHaneda ukuya e-US, eYurophu nase-Asiya, kwaye uhambo lwaphesheya kwezilwandle aluyi kuba lula kuphela kubahlali basezidolophini eTokyo, kodwa ngokugubungela ekhaya ngokubanzi i-JAL, abakhweli abavela kwingingqi yaseJapan nabo fumana ukuhamba phesheya kunomdla ngakumbi kunangaphambili ngonxibelelwano olusebenzayo eHaneda.
I-Japan Airlines izakuqala ukukhonza abakhweli kwisikhululo seenqwelomoya esitsha seTokyo International Airport xa ivula ngokusesikweni ngo-Okthobha 21, 2010. Ukongeza, i-JAL iyakwazisa izibonelelo zayo ezihlaziyiweyo ezinje ngee-check-in counters kunye ne-lounges kwisikhululo sabahambi 1. njengoko ukuphuculwa kugqityiwe ukusuka phakathi ku-Okthobha.
Ukuhlangabezana neemfuno zabathengi be-JAL eziza kuqhagamshela phakathi kwenethiwekhi yasekhaya ebanzi kunye nehlabathi ngeHaneda, i-JAL iya kubonelela ngoluhlu lweenkonzo ezintsha neziphuculweyo kunye namaziko asekwe kwingcinga ethi "Ukulula, ukuKhangela, kunye nesantya" kunye noxabiso lwayo olusuka entliziyweni kubathengi bayo.
JAL International Ukuhamba kunye neeLounges zokufika
Amalungu e-JAL Mileage Bank afanelekileyo (i-JMB), kunye neklasi yokuqala kunye nabakhweli abakumgangatho ophezulu banokukhangela phambili kwindawo yokufika yaseLounge kuhambo lwabo olungenayo kwaye bafumane intuthuzelo kwindawo eqhelekileyo xa i-JAL iseka i-JAL First Class Lounge kunye ne-Sakura Lounge abakhweli abalinde ukukhwela iinqwelomoya zabo.
Eyilwe ngemibala efudumeleyo kunye nendawo ebanzi eneshishini elichongiweyo, indawo yokutyela, kunye neendawo zokuphumla, i-JAL ijonge ukubonelela ngendawo yokuphumla enomoya wokumema oxhotyiswe ngezixhobo ezifanelekileyo ezinokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi abaxabisekileyo. Iimodeli zamva nje zezitulo zokuthambisa kunye neendawo zokuhlambela ezifana nehotele ziphakathi kwezinye izinto ezinikezelwayo ukuqinisekisa intuthuzelo enkulu kubakhweli, ngakumbi kwabo balinde ukukhwela iinqwelomoya ezihamba ebusuku.
Ekufikeni kwabo, abagibeli abafanelekileyo banokusebenzisa indawo yokuqala yokufika ye-JAL, enezinto zokuhlambela kwaye apho kuya kubonelelwa ngokutya okulula kunye neziselo. Abahambi beshishini abafika kusasa baya kuyifumana i-Arrival Lounge ukuba ibe nomtsalane ngokukodwa ekusebenzeni kwayo njengendawo yokuhlaziya emva kokuphumla kamnandi ebhodini kwaye ngaphambi kokuqala usuku olunemveliso eofisini.
Imiqathango elawula ukusetyenziswa kwee-lounges kunye neenkcukacha zazo ziya kufumaneka kwiphepha lasekhaya le-JAL kungekudala.
Unxibelelwano olukhawulezayo phakathi kweenqwelo moya zeqela leJAL
I-JAL isebenza ngenqwelomoya ngaphakathi kweTheminali 1, esele ikufuphi kwisiphelo sendlela entsha. Nangona kunjalo, ukwenza lula ukuhambisa phakathi kweenqwelomoya ngokukodwa kubathengi beJAL kunye neenqwelomoya zeqabane, i-JAL iyakwazisa ngenkonzo yebhasi yokuhamba ngokuthe ngqo ethatha nje imizuzu esi-8 ukuya kwelinye.
Abakhweli abanonxibelelwano oluvela kwizikhululo zeenqwelo moya zaseJapan ukuya kwiinqwelomoya kwiHaneda baya kuba nakho ukukhangela imithwalo yabo kuhambo lonke. Ngelixa abakhweli abadlulisa ukusuka kwiinqwelomoya ukuya kwiindlela zasekhaya kufuneka bathabathe imithwalo yabo xa befika eHaneda ukuze bafumane imvume yesiko, i-JAL isete ikhawuntari yokungena yasekhaya efumaneka kwisiphelo samazwe aphesheya apho abakhweli banokujonga khona kwimithwalo yabo yasekhaya Inxalenye yangaphambi kokutsiba kwinkonzo yebhasi yeshuttle ebonelelwe yi-JAL ibekelwe ukuhamba kwabo ngokuzayo kuphela nemithwalo yabo yokuphatha ngesandla.
Okwangoku, iinkqubo zokungena ziyafuneka kwisikhululo senqwelomoya saseHaneda kunxibelelwano olusuka ekhaya ukuya kwiikhowudi zokuhamba ngeenqwelomoya ezenziwa zezinye iinqwelomoya.
Ukuhlaziywa kweeNdawo zokuGcina iiNdawo zaMakhaya
I-JAL ihambise ii-lounges zayo zasekhaya kwiTheminali 1 yaya kumgangatho wesithathu wesakhiwo setheminali, esibonelela ngoku ngomgaqo weenqwelo-moya. I-Diamond Premium Lounge ehlaziyiweyo kunye neSakura Lounge iya kuvulwa ngokusesikweni ukusuka nge-Okthobha 20. Inika abakhweli indawo ethambileyo kunye nokuphuculwa kwemfihlo, ii-lounges zikwanendawo yethala leencwadi elungele abahambi beshishini, ishawa kunye neendawo zokuthambisa, kunye negumbi losapho elifanelekileyo abathengi abahamba nabantwana.
Kubagibeli abangafanelekanga kwasekuqaleni ngokodidi lwabo lokuhamba okanye ubulungu beflaya rhoqo, i-JAL iya kuqala ukubonelela ngokusetyenziswa kweSakura Lounge ngentlawulo. Abakhweli kufuneka benze ugcino kwi-intanethi ngaphambi kohambo lwabo. Iinkcukacha kunye neemeko ziya kufumaneka kwiphepha lasekhaya le-JAL kungekudala.
Uphuculo kwiiKhawuntara zokuNgena
I-JAL ihlaziye iiNkxaso zeeNdwendwe kunye neeNdawo eziPhambili zeNdwendwe ezibekwe kumgangatho wesibini weTheminali 1.
Ukubonakalisa ukuthathelwa ingqalelo kwabakhweli abaneemfuno ezizodwa, ikhawuntara yeSmiles Support ngoku ibandakanya umxholo woYilo lweNdalo iphela ukuze abantu abaninzi kangangoko, nokuba bangakanani ubudala okanye amandla omzimba, babe nakho ukuyisebenzisa ngokulula. I-JAL iqale ukusebenza kwezi khawuntari zikumazantsi nakumantla ephiko lesiphelo ukusuka ngoJulayi nango-Agasti walo nyaka, ngokwahlukeneyo.
I-JAL iyaqonda ukuba ixesha lelona xabiso kubakhenkethi abaninzi beshishini kwaye ke ngoko bazama ukunciphisa ixesha elithathiweyo ukusuka ekungeneni kwindawo yokukhwela. Iikhawuntari ze-JAL First Class kunye ne-JAL Global Club (JGC) ziye zalungiswa ngenjongo yokucinga, kwaye ijelo lokhuselo elizinikeleyo lenzelwe abakhweli be-JAL First Class, amalungu e-JMB Diamond, kunye namalungu enkulumbuso ye-JGC, ukuze bakwazi ukuqhuba kakuhle nangokukhawuleza ukhuseleko kwiindawo zokuphumla ezihlaziyiweyo ngaphambi kokubaleka.
Ngekwindla le, i-JAL imema abakhweli ukuba beze kumava eenkonzo ezintsha eHaneda.